Waa Maxay Best Book Dukaamada The In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa Maxay Best Book Dukaamada The In Europe
Waxaa jira badan oo sababaha ay dadku u jecel yihiin in ay u safraan. Mid ka mid ah kuwa aad inta badan maqli karo waa awooda u leedahay cusub oo xiiso leh aragnimada. Maxaa ka dhigay safar si qurux badan yahay in shakhsiyaad kala duwan la faraxsan doonaa waxyaabo kala duwan. junkies adrenaline qaadan firfircoon fasaxyada, raadinayso badhaadhaha xaaladaha wax yar oo khatar ah. Foodies booqo meelo cusub oo ay ku farxi taarikada ay la dhadhan cusub oo xiiso leh. Oo bookworms ku dhex safra, maktabadaha iyo dukaamada buugga waxay noqon kartaa meelaha ugu quruxda badan dunida oo dhan. Haddii aad la socdeen iyada oo Europe iyo dukaamada ka raadsato buugga ugu fiican Yurub si ay u booqdaan tareen, waxaan leenahay a talooyin dhowr ah oo aad loogu talagalay:
France Best Book Bakhaarrada – Shakespeare & Company, Paris
France waa dal aad u faraxsan, iyo Paris waa ay caga ugu caansan. Marka noocyada farshaxanka qabaa of Paris, Notre Dame ku soo dhaca maskaxdooda, la ilaha qurux badan iyo geedo cherry in magooli. Waxaa si hufan aragtida waxaad ka heli doontaa marka aad booqato Shakespeare & Company, oo ay weheliso ambiance cajiib ah ee buugaagta gudaha.
qorayaasha badan (oo ay ku jiraan Ernest Hemingway iyo Voltaire) ayaa waqti qoraal dhismaha this qarnigii 17aad. The muuqaal wuxuu ka kooban yahay armaajo jir ah iyo buugaag, Mire Waqaf oo faro badan qolalka yar iyo nooks. dukaanka buugga The sprawls ka badan laba dabaq, oo ka baxsan u muuqataa uga yar yahay waa. Shakespeare & Shirkadda ayaa sidoo kale marti dhacdooyinka fiid iyo akhrinta qoraaga, taas oo waa wax lover ma suugaanta seegi waa in.
Venice waa mid ka mid ah ugu taataabtay magaalooyinka raadinaya in Italy, iyo waxa ay sidoo kale hoy u tahay mid ka mid ah dukaamada ugu caansan buugga ugu fiican Yurub. Libreria Acqua Alta waxaa aad loogu yaqaanaa kaydinta buugaag ku qubeysto iyo xataa gondola a. sidoo kale waxaa jira meelo kale lagu kaydiyo, sida baaldiyo iyo weelal kale sabayn. Waxaa sidoo kale jaranjarada a sameeyey oo gebi of buugaag jir ah ay balbalada dib.
Iyada oo ay gudaha u qurux badan, Library in Water Sare Venice waa shaki la'aan booqo iyo ku farxi doonaa lover buug kasta oo. Haddii aad rabtid in aad u leedahay naftaada iyo aad gudaha laga badiyay, bet aad ugu fiican waxaa halkaas ka socday sida ugu dhakhsaha badan u furmay subaxda.
Maastricht ee Netherlands ma laga yaabo in ay dusha sare ee liiska kasta oo dooni dalxiis. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon waa, haddaad jeceshihiin dukaamada kitaabka iyo buugaagta gaar ahaan. Dominicans ama Selexyz Dominican Church in magaaladanu tahay a 700 sano jir ah qaab-dhismeedka dhisay Hababka kala duwan ee Gothic naqshadaha.
Waa breathtaking on dibadda iyo minimalist gudaha. Dominicanen waxaa sidoo kale la faro badan oo ah horyaal in ku farxi doonaa wixii qalbigiisa lover buug ka Daadan. Waxaad soo dhufsan karto a kafeega in cafe ah la socda inta aad ka akhrisan buug. Haddii kale, aad ku raaxaysan karaan view cajiib ah ka dabaqa sare.
Cook & Kitaabka waa dukaan buug xiiso iyo makhaayad oo ku yaalla Woluwe-Saint-Lambert, Belgium. Inkasta oo dukaamo badan buugga ugu fiican bixiyaan qaar ka mid ah cunto iyo cabitaan, Cook & Book qaadataa fikradda waxoogaa dheeraad ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hoos u fadhiisan Idmo hareereysan buugaag kala duwan. Taasi waxa ay ka dhigaysaa meel aad u fiican, kuwa jecel inay ku raaxaystaan ​​labada buugaag wanaagsan iyo cunto fiican. Waa maxay more, waxa hubaal ah ma aha wax aad la kulmi karaan maalin kasta.
Ready in ay soo booqdaan qaar ka mid ah dukaamada buugga ugu fiican Yurub? Waxaad ku safri kartaa tareen si Paris iyo Venice, iyo sidoo kale in ay Netherlands iyo Belgium. Jartaan tikidhka aad hore iyo bilaabaan qorshaynta dherjinta buug aad fasax soo socda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/charming-book-stores-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / ja ama / TR iyo luuqado badan.
#buugga #buugaag #dukaanka buugta #dukaamada buugaagta #traveleurope